I-Quinoa Oligopeptide Powder-kwiFektri yoMvelisi
Ubunzima be-molekyuli ye-quinoa oligopeptide powder bungaphantsi kwe-1000u, enokufunxwa ngumzimba womntu ngokukhawuleza. Kwakhona, iiquinoa ezincinci zeepeptides zeemolekyuli zine-bioactivity eyahlukileyo.
Ividiyo yeQuinoa Oligopeptide Powder
Quinoa Oligopeptide Powder Ukucaciswa
Igama lemveliso Quinoa Oligopeptide Powder
umbala Mhlophe okanye Khanya mthubi
Yintoni iquinoa Oligopeptide powder?
I-quinoa oligopeptide powder ilungiswa ngokuchasana, ukutyumza, i-enzymatic hydrolysis, ukomisa, ukupakisha njalo njalo.
Zithini izibonelelo zeQuinoa Oligopeptide powder?
Iquinoa antioxidant peptides inesakhono esihle sokuqhekeza isuperoxide anion radicals kunye nehydroxyI radicals kwaye ibonise ulwalamano lwethamo elifanelekileyo.
I-Lunasin equlethwe kwi-quinoa luhlobo lwe-polypeptide, olunemisebenzi emininzi yebhayoloji kwaye inokuphucula ukukhuselwa komzimba, i-antihyper -tension kunye ne-anticancer.
Isondlo kwaye silungelelene
Iprotein yeQuinoa iqulathe ikakhulu ialbumin kunye neglobulin (44% - 77%). Umxholo we-gliadin kunye ne-glutelin usezantsi, ke unokuqina okuhle kwaye kulula ukufunxwa ngumzimba womntu. Kwaye ngenxa yesiphumo se-disulfide bond, iprotein ye-quinoa inokuzinza okuhle, igcina iimpawu zoqobo kunye nesondlo emva kokuqhubekeka.
Indlela yokuPhendula umphezulu wokuSebenzisa i-Enzymatic Hydrolysis yeBuckwheat Protein ukulungiselela inkqubo ye-Antioxidant Peptides.
Inkqubela phambili kuFundo lweeCandelo eziSebenzayo zeQuinoa.
Inkqubela phambili yoPhando kwiimpawu, iipropathi kunye nokukhutshwa kweProtein yeQuinoa.